गोल गर्न आँखा झिम्क्याउने र रेफ्रीलाई रिझाउने काम सरकारले गर्दैनः विष्णु रिमाल (अन्तर्वार्ता) « Dainiki
गोल गर्न आँखा झिम्क्याउने र रेफ्रीलाई रिझाउने काम सरकारले गर्दैनः विष्णु रिमाल (अन्तर्वार्ता)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गर्नुभएको मन्त्री फेरबदलको विषयले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा बढी नै चर्चा पाइरहेको छ । उहाँको स्वास्थ्यको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीका प्रचार हुने गरेकै छन् । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा सरकारको छ तर नागरिकले अनुभूति हुनेगरी सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य तथा कार्यशैलीको सेरोफेरोमा गोरखापत्रले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग गरेको कुराकानी  ।
सल्लाहकार वा मुख्य सल्लाहकारको भूमिका एक किसिमको सहजकर्ताको काम हो । हाम्रो देशमा ‘चिफ अफ स्टाफ’ भन्ने चलन छैन तर कतिपय देशमा त्यो नियुक्ति गरेर काम गर्छन् । कामको सहजताका लागि त्यो गर्ने प्रचलन हो । अमेरिकामा मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्ने व्यक्ति ‘चिफ अफ स्टाफ’ राख्ने प्रचलन छ । भारतमा चिफ अफ स्टाफ त भनिदैन तर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई प्रमुख बनाएर काम लिने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेगरी काम गराउने गरिन्छ । हामीकहाँ खासखास विज्ञ राखेर काम गर्ने प्रचलन चल्दै आएको छ । मुख्य सल्लाहकार कति विज्ञ छ भन्दा पनि विज्ञको समूहलाई समन्वय गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।
सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने काम हो । प्रधानमन्त्रीको विज्ञता, क्षमता नभएर मुख्य सल्लाहकार राख्ने हैन कि प्रधानमन्त्री र विज्ञबीचको पुल बनेर काम गर्ने पद हो मुख्य सल्लाहकार वा सल्लाहकार । हाम्रो यहाँ तीन संयन्त्र (विङ) छ त्यो काम गर्ने । पहिलो, स्वकीय सचिवालय आधिकारिक निवासमा हुन्छ । दोस्रो– सहसचिवको नेतृत्वमा निजी सचिवालय हुन्छ । तेस्रो– मुख्य सल्लाहकार वा अन्य सल्लाहकार समूह । यी तीनको गठजोडबाटै निस्कने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीलाई फिडव्याक दिने, सेवाग्राही, सम्पादन गर्ने मन्त्रालयबीच सहजकर्ता र समन्वयको काम नै हो हामीहरूले गर्ने ।
यो पाँचवर्षे अवधिको सरकार हो । पहिले आयु नतोकेका सरकार बन्थे । एकातिर कार्यसम्पादनको कुरा छ, अर्कोतिर अरूलाई पालो दिने विषय पनि छ । फुटबल खेल खेल्दा ११ खेलाडीबाहेक थप खेलाडी पनि समूहमा राखिन्छ नि । कसैलाई केही भयो भने वा जोगाउनुपर्ने भयो भने पनि अरूलाई अवसर दिने गरिन्छ । अहिले जो साथीहरू मन्त्रीबाट फेरिनुभएको छ, असक्षम भएर होइन । असक्षम भए त घोषणा नै गरिन्थ्यो होला नि । उहाँहरू चुनाव जितेरै आएको हुनुहुन्छ । जनताले चुनेर पठाएको सांसद असक्षम हुने कुरै भएन । अरूलाई पालो दिएकोमात्र हो ।
सरकारको कामलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन र समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्नुभएको हो । बाहिर जानुभएका साथीहरूले पनि रामै्र काम गरेर जानुभएको छ । असक्षम भनेर कोही जानुभएको छैन । सक्षम हुनुहुन्छ, बाहिर पनि राम्रै काम गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिनको क्याबिनेट बैठकमै सबै सदस्यलाई भोलि हेरफेरका लागि तयार भएर बस्नुहोला भन्ने जानकारी दिनुभएकै थियो । यस विषयमा समाचार लेखेका मिडियाले हेरफेरपछि चाहिँ फलानोलाई विनाकारण निकाल्यो भनी मिडियाले धेरै उचालेर समाचार दिनु भनेको अस्थिरतामा रमाएर आफ्नो अनुचित अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम हो । हाम्रो मिडियाले यस्तो भ्रम नराखिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।
यो आफैँमा अन्तरविरोधी कुरा भयो । असक्षम भएर कोही बाहिर गएको होइन । अहिले विरोधीलाई कहाँ ल्याइएको छ ? सबै ‘सूर्य’ चिह्नबाटै चुनाव लडेर जित्नेहरू नै आउनुभएको छ । सबै हाम्रो मान्छे हुनुहुन्छ । चुनावमा हाम्रो, मन्त्री बन्ने बेला अर्को भन्ने कुरा त भएन नि ! प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नेबित्तिकै अन्यथा हुने होइन । सरकारको कामबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिज्यूलाई नियमित ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । भेट्नेबित्तिकै पार्टीको कुरा गर्न गयो भन्ने होइन ।
प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा प्रमुखहरू पनि नियमित भेट्नुहुन्छ । के इमर्जेन्सी लाग्न लाग्यो भनेर बुझ्ने त ? राज्य सञ्चालनका यति कुरा नबुझ्ने कोही सांसद नै हुनुहुन्छ भने पनि भोलि राज्य चलाउने ल्याकत कति राख्न्ुहोला ? राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्नेगरी पहिला हैसियत नभएको, कसैलाई नर्टेने भन्नेखालको प्रचार गरियो । उहाँले आफ्नो क्षमता देखाइदिनुभयो अब पार्टी–पार्टीबीचको विवादमा मुछ्न खोजिएको छ । यो अनावश्यक रूपमा तानिएको हो । । राष्ट्रपति संस्था हो, व्यक्ति होइन । उहाँको कुनै पार्टीसँग लिनुदिनु छैन । उहाँले त विपक्षी दल र अरू दलका नेतालाई पनि भेट्नुहुन्छ नि । भएका सबै संवाद बाहिर ल्याउने कुरा पनि हुँदैन ।
हाम्रा मिडियाहरूले विषय नै नपाएर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ । अतिरञ्जित तरिकाले मनोरोग लागेकोजस्तो समाचार आउने गरेको छ । यसमा मेरो असहमति छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक छ । उहाँले हामी कोही स्वस्थ मान्छेभन्दा बढी काम गरिरहनुभएको छ । अस्वस्थ भए कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो होला ? प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको हिसाबले अलि कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने त पहिलेदेखि जानकारी छ । उहाँ लामो समय जेल बस्दै गर्दा अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो स्वास्थ्य लुकाउनुभएकै छैन उहाँले । थपमा, १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । प्रत्यारोपण गरेको आयु कति हुन्छ ? खोज गर्दा हुन्छ । मान्छेहरू ३५ वर्षसम्म बाँचेको देखिएकै छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको आयु यतिउति भन्नु डेढअक्कली प्रचार हो । स्वास्थ्यमा अन्दाजबाजी गर्नुहुँदैन ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि ओरिजिनल अङ्गलाई कमजोर र राखेको अङ्गलाई फुर्तिलो बनाउन नियमित औषधि खानुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही गरिरहनुभएको छ । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले फेरि मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि गर्न सक्नुहुन्छ । सूचना पाउँदापाउँदै पनि मिडियामा अड्कलबाजी धेरै भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पद नै व्यस्त रहने पद हो । अरूले आठ घन्टा काम गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले दिनको १८ घन्टा काम गरिरहनुभएको छ । धेरै अस्वस्थ भएको भए यत्ति धेरै काम कसरी गर्नुहुन्थ्यो ? त्यसैले मिडियामा आएको समाचारजस्तो खराब स्वास्थ्य उहाँको होइन ।
यो नारा शब्दमात्र होइन, समृद्धि भनेको कुनै सन्तानको नाम होइन, अर्थ छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले । समृद्धि भनेको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन्छ । समृद्ध मुलुकमा सबै जनता सुखी हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । विकसित देशमा पनि जनता दुःखी छन् । चुनावताका पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा पनि यो नारा उल्लेख गरेको छ । यो लोकप्रियताका लागि गरिएको होइन, काम गर्नका लागि हो । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो नाराको व्याख्या ग¥यो । आयोगले समृद्धिका चार आधार र सुखीपनको छवटा आधार बनाएर व्याख्या ग¥यो । आयोगले २५ वर्षको योजना बनाएको छ ।
सरकारले पहिलो वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष व्याख्या गरेको छ । त्यही आधारमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । झन्डै दुई सयवटा नयाँ कानुन बन्नुपर्ने थियो तर तत्कालीन सरकारले केही गरेन । अहिलेको यो सरकारले नै सबै कानुन निर्माण ग¥यो । संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन ग¥यौँ । १६५ वटा कानुनलाई एकैचोटि संशोधन ग¥यौँ । भौगोलिक रूपमा यति प्रदेश भनेर भन्यौँ तर वित्तीय सङ्घीयताको विषयमा तयारी नै भएको थिएन । कुनै पनि एकात्मक मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि दुई वर्षसम्म वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेको उदाहरण छैन । यो दुई वर्षमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । कर्मचारी व्यवस्थापनको पनि काम भएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिवादी भएका छन् । विचारभन्दा पनि व्यक्ति र मौसमी भएको छ । सरकारले गरेका कामको प्रचार पार्टी पङ्तिबाट पनि नभएको सत्य हो । तर, सरकारले आफ्नो कामकाजबारे जानकारी दिने प्रणाली बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ताले हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रभावकारी रूपमै जानकारी गराउँदै आउनुभएको छ । यो पनि सूचना दिने एउटा प्रणाली बनेको छ । प्रस्तुति : लक्की चौधरी (यो अन्तरवार्ता सम्पादकको अनुमतिले गोरखापत्रबाट साभार गरिएको हो-सम्पादक)